Naanị Israel gburu njem njem site na iji izu 2 iche maka mmadụ niile
Home » Na-agbasa News Travel » Naanị Israel gburu njem njem site na iji izu 2 iche maka mmadụ niile
Israel, ala nke okike mechiri ókèala ya nye ndị ala ọzọ, gụnyere ndị njem nleta. Citizensmụ amaala Israel na-alaghachi na mba ahụ ga-abanye iche iche izu abụọ.
Na Israel Prime Minista Benjamin Netanyahu ka gburu Israel Tourism. Onye ọ bụla na-abanye na steeti ndị Juu ga-ahụrịrị ụbọchị iri anọ na anọ iji gboo coronavirus
Palestian Authority na-egbochi ndị njem nleta si mba ọzọ maka izu abụọ, mechiri ụka Betlehem na ụlọ alakụba yana mmadụ 25 gosipụtara nje ahụ yana otu na Tul Karm. A kpọpụrụ ndị obodo US iri na atọ n'otu ụlọ nkwari akụ Betlehem.
Dabere na ntuziaka sitere n'aka Minista na-ahụ maka ime obodo nke Israel bụ Aryeh Deri, iwu ndị nchekwa maka ndị Israel ga-abanye na mbido elekere asatọ nke ụtụtụ Mọnde. Iwu maka ndị ala ọzọ na-abata na mba ahụ kwuru na ha kwesịrị igosi na ha nwere ụlọ zuru oke iji kpọpụ iche n'oge ha nọ na mba ahụ. Iwu maka ndị ala ọzọ ga-abanye na mbido elekere asatọ nke mgbede Tọzdee.
Mịnịsta ala Benjamin Netanyahu enyela iwu ndị kwụrụ iche nye ndị niile na-abata mba ahụ. Iwu mkpuchi iche ga-eme izu abụọ ma nwee ike imetụta ụfọdụ ndị Israel 300,000. Netanyahu kpọrọ nkwaghari ahụ "mkpebi siri ike, mana ọ dị mkpa."
Naanị taa Nlegharị anya nke Israel ziga a pịa ntọhapụ na eTurboNews na-ekwu na Israel na-anabata ndị ọbịa ma ha enweghị nchebe pụọ na COVID-19. eTN ekwupụtaghị mwepụta ahụ. Na mbido izuụka gara aga Israel depụtara aha ọtụtụ mba gụnyere Germany, Italy, China, South Korea, Thailand.
SMART 2020 ga-akwado ya site na Nzuzo Saint Martin Resort & Spa
ETOA chọrọ gọọmentị totali iji kwado njem nlegharị anya n'oge COVID-19
IATA: Bilie na ebubo ụgbọ elu ndị Spen ga-emebi mgbake akụ na ụba, mebie ọrụ
Hotellọ ọrụ ụlọ nkwari akụ US na-atụ anya ịkwụsị 2021 iji kwụsị ọrụ 500,000
23 nwụrụ, 79 merụrụ ahụ na oke ụgbọ oloko Mexico City dara
Ahụike Na-enweghị Ahụhụ nke World Tourism Network malitere